Iphoyisa 'libulale' umkalo nezingane zabo ezimbili | isiZulu
Iphoyisa 'libulale' umkalo nezingane zabo ezimbili
VIDEO: Uzibulele onqatshelwe wumndeni wakhe ukuba abelethe ngomthungo
Umfana, 9, uzibulalele esikoleni
Ubaba uzibulele ngemuva kokubulala indodakazi
Compiegne - Iphoyisa lidubule labulala unkosikazi walo nezingane zalo ezimbili, eneminyaka emithathu neneminyaka engu-5 ubudala, esiteshini sesitimela eFrance ngeSonto ngaphambi kokuzibulala, kusho iziphathimandla.
Ingxabano yomndeni iholele amaphoyise emzini walezi zithandani ngosuku lwesigameko sokubulala, lapho unkosikazi etshele khona amaphoyisa ukuthi uhlela ukumshiya umyeni wakhe.
Leli phoyisa lavuma "ngomoya ophansi" ukuthi kube ngumakhelwane wabo ohambisa umkakhe esiteshini sesitimela esisenyakatho yedolobha iNoyon, okuyibanga elifushane nasemzini wabo, kusho umshushisi uVirginie Girard etshela abezindaba.
OLUNYE UDABA:Zimkhalele owadushela owesifazane emgwaqeni egijima
Unkosikazi ube esehamba nezingane ezintathu kwezinhlanu zabo, kwathi ezimbili zasala nomakhelwane.
Kuthe unkosikazi nezingane belinde isitimela, umyeni wavele wathushula esikhaleni wafike wavulela ngenhlamvu ebhekise emndenini wakhe, kwashona unkosikazi nezingane ezimbili.
Ingane yesithathu, okuyintombazane eneminyaka emihlanu ubudala eyiwele lebulewe, ayilimalanga ngesikhathi sesigameko.
"Umyeni yiphoyisa elisebenzela ekomkhulu lamaphoyisa aseParis elingakwazanga ukwamukela ukulahlwa ngumkalo," kusho uGirard.